မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည့် OPPO A83 အဖွဲ့ဝင်အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ Androidsis
မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည့် OPPO A83 အဖွဲ့ဝင်အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ
အဆိုပါ Oppo A83 ယခုတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်၎င်းနှင့်ဤစမတ်ဖုန်း၏ထူးခြားချက်မှာလက်ဗွေဖတ်သူများ၏မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုသာအာရုံစိုက်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ဖန်သားပြင်အပြည့်ကဲ့သို့ ပို၍ သိသိသာသာတိုးတက်လာနေသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခု terminal သည်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောလဟာလများစွာကိုရိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းယခုပင်ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်စမတ်ဖုန်းအသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးရှိသည်. ငါတို့အကြောင်းကိုမင်းပြောမယ်
မင်းတို့နဲ့တရုတ်Opရာ Oppo အကြောင်းမင်းတို့နောက်ဆုံးပြောခဲ့တာကငါတို့အကြောင်းပြောခဲ့တယ် Oppo A75 နှင့် A75S.
ကောင်းပြီ၊ Oppo သည်ကောလာဟလများထုတ်ရန်ငြီးငွေ့နေပုံမရ၊ ၂၀၁၇ အောင်မြင်မှုကြီးနှင့်အောင်မြင်မှုရရှိပြီးနောက်၊ ဤကုမ္ပဏီသည်အများပြည်သူ၏ ဦး စားပေးမှုတွင်ဆက်လက်တည်ရှိရန်၎င်း၏ကိုယ်ရံတော်ကိုလျှော့ချလိုခြင်းမရှိပါ.
1 Oppo A83 အင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
1.1 Oppo A83 သည်လက်ဗွေဖတ်စက်ကိုဖယ်ရှားပစ်သည်
Oppo A83 အင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ဒီ terminal မှာအားကောင်းတဲ့ 2.5Ghz ရှစ် core ပရိုဆက်ဆာရှိတယ်။ ယခုအချိန်တွင် Oppo ကမည်သည့် SoC မော်ဒယ်လ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်အမြန်နှုန်းနှင့် Core များ၏အရေအတွက်ကြောင့် Mediatek Helio P23 ဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့သည်။
RAM အတွက်ဆိုရင် 4GB က Oppo A83 ပါလိမ့်မယ်။ 32GB သိုလှောင်မှုပမာဏနှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 3.180mAh အပြင်
နှင့်အညီ, မျက်နှာပြင်နှင့်ပတ်သက်။ , ၅.၇ လက်မ ၁၈: ၉ FullHD panel သည်ဤမိုဘိုင်းကိုသယ်ဆောင်သည်။
ကင်မရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ နောက်ကျောမှာ, Oppo ၏အဆိုအရ 13MP ရှိသည့် LED Flash ပါဝင်သည့် sensor သည် 50MP resolution ရှိသည် ဓါတ်ပုံရိုက်ချက်များစွာကိုအတူတကွစုစည်းပြီးထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရောက်ရှိရန်၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ front တွင် 8MP အာရုံခံကိရိယာရှိပြီး beautification function ကိုပြုလုပ်ထားပြီးအတုဥာဏ်ကိုအခြေခံသည်။
Oppo A83 သည်လက်ဗွေဖတ်စက်ကိုဖယ်ရှားပစ်သည်
အခြားကိရိယာများနှင့်မတူသည်မှာ၎င်းသည်သော့ဖွင့်ရန် facial recognition နှင့်အတူပါ ၀ င်ရုံသာမကလက်ဗွေဖတ်စက်ကိုပါသယ်ဆောင်ပေးသော Oppo A83 ကဒုတိယနေရာမှထွက်လာပြီး Apple X သည် iPhone X နှင့်ထပ်တူဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်.
Oppo A83 အသုံးပြုသည့်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာသည်မျက်နှာ၏ ၁၂၈ မှတ်အထိသိနိုင်သည်။ terminal ကိုသော့ဖွင့်ရန် 0.18 စက္ကန့်သာလိုသည်.
Oppo A83 ကိုဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်သော်လည်း သင်ယခုတရားဝင် Oppo ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည် ဒေါ်လာ ၂၁၄ (သို့) ယူရို ၁၇၉ လောက်ကျသင့်မှာပါ။ ထို့အပြင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်မှတ်ပုံတင်ပါကပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းဖြင့်သင်သည် QY1399 Bluetooth နားကြပ်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည့် OPPO A83 အဖွဲ့ဝင်အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ